Madaxda Soomaalida oo shir uga furmayo Muqdisho, xilli Axmed Madoobe iyo Guudlaawe wadaan qorshayaal cusub. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Madaxda Soomaalida oo shir uga furmayo Muqdisho, xilli Axmed Madoobe iyo Guudlaawe wadaan qorshayaal cusub.
Mgaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in maanta oo Axad ahg ay kulan ku yeeshaan Golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxda Shanta dowlad Goboleed & Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Shirkaan oo lafilayey inuu shalay furmo ayaa u baaqday sababo la xiriira Madaxda dowlad Goboleedyada oo Muqdisho ka maqnaa uu u baaqday, hayeeshee waxaa haatan ku sugan Muqdisho Madaxweynayaasha maamulada, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland & Puntland halka uu maqan yahay Madaxweynaha Hir-Shabeelle.
Shirka oo uu guddoomin doono Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka, howlihii ka qabsoomay tan iyo heshiiskii 27-kii May iyo caqabadaha la gudboon heshiiskii doorasho.
Xog hoose ayaa sheegaysa in Madaxda dowlad Goboleedyada qaarkood ay doonayaan in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii doorasho, iyaga oo doonaya in Goobaha doorashoyinka lagu qabanayo inay noqoto Maamul kasta hal Goob, si uu u yaraado culeys farabadan oo ay la kulmi lahaayeen.